၂၀၁၀ ခုနှစ်အတွက် ဒုတိယအကြိမ် RWCT သင်တန်းပြုလုပ် | B.M.T.A Burmese Migrant Teachers' Association
← ဆရာမန်းသန်းထူး၏ နောက်ဆုံးခရီး အမှတ်တရ ပုံရိပ်များ
ထိုင်းတောင်ပိုင်းမှာ ကျောင်းဖွင့်ပြီ →
၂၀၁၀ ခုနှစ်အတွက် ဒုတိယအကြိမ် RWCT သင်တန်းပြုလုပ်	Posted on May 11, 2010	by bmta05 ၂၀၁၀ မေ ၁၀ ၊ မဲဆောက်။
ရွှေ့ပြောင်းဒေသ ဆရာဆရာမများအတွက် RWCT (Reading Writing and Critical Thinking ) training ကို ယခုနှစ်အတွက် ဒုတိယ အကြိမ်မြောက် သင်တန်းကို CDC ကျောင်းတွင် ပြုလုပ်ခဲ့ရာ ရွှေ့ပြောင်းဒေသရှိ ဆရာ/ဆရာမ ၄၀ တက်ရောက်နေကြပါသည်။
TTBT (Teacher Training for Burmese Teachers ) ၏ သင်တန်းဆရာ ဒေါက်တာသိန်းလွင်မှ ရွှေ့ပြောင်းဒေသရှိ ဆရာ/မ များအတွက် RWCT သင်တန်းများကို မဲဆောက်ဒေသတွင် ၂၀၀၆ ခုနှစ်မှ၍ နှစ်စဉ် နှစ်တိုင်း ပြုလုပ်ခဲ့ရာ ၂၀၁၀ ခုနှစ်အတွက် ယခုတကြိမ်သည် ဒုတိယ အကြိမ်ဖြစ်ပါသည်။
Student center learning system နှင့် စဉ်ဆက်မပြတ် အကဲခတ်အတန်းတင်ပေးရေးစနစ် (CAPS) System ကို အသုံးပြုလျှက်ရှိသော ရွှေ့ပြောင်းဒေသ ကျောင်းများအတွက် RWCT နည်းစနစ်သည် အထောက်အကူ ပြုသည်ဟု RWCT သင်တန်းများကို တက်ရောက်ပြီး လက်တွေ့သင်ကြားလျှက်ရှိသူ ဆရာ/မ များက ပြောပြကြပါသည်။
RWCT သင်တန်းများကို ရွှေ့ပြောင်းဒေသရှိကျောင်းများမှ ဆရာ/မ များသာမက ပြည်တွင်းရှိ ကိုယ်ထူကိုယ်ထ ကျောင်းအချို့မှ ဆရာဆရာမများလည်း စိတ်ပါဝင်စားစွာ လာရောက်တက်ရောက်ကြကြောင်း သိရှိရပါသည်။
RWCT သင်တန်းများကို BMTA မှ TTBT နှင့် ပူးပေါင်းစီစဉ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
This entry was posted in ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်. Bookmark the permalink.	← ဆရာမန်းသန်းထူး၏ နောက်ဆုံးခရီး အမှတ်တရ ပုံရိပ်များ